१८ बर्षो प्रयासपछि मनाङमा पहिलोपटक मोटर
१८ बर्षो अथक प्रयासपछि हिमाल पारीको जिल्ला मनाङमा पहिलो पटक मोटर पुगेको छ ।
निर्माणाधिन वेसीशहर चामे सडकको निर्माण कार्यको अन्तिमसंगै लमजुङ सदरमुकाम वेसीशहरवाट झण्डै ४० किलोमीटरको दुरी सिरानतालमा मोटर पुगेको हो । यसअघि वेसीशहरदेखि ३१ किलोमीटरको दुरीमा रहेको च्याम्चेसम्म मोटर चलेको थियो ।
लमजुङ सदरमुकाम वेसीशहरवाट गएको ग १ झ २५२ र २५३ नम्बरको जीप पहिलोपटक मनाङको धारापानी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर १ को सिरानतालमा पुगेपछि स्थानीयवासिन्दा दंग परेकाछन् ।
ताल गाउँका सिंगो वासिन्दा लालपर्ूजा बीहिन
मनाङको धारापानी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर १ मा पर्ने ताल गाउँमा वसोवास गर्दै आएका स्थानीयवासिन्दा लालपर्ूजा बीहिन छन् ।
झण्डै ७० घरधुरीको हाराहारीमा रहेका ताल वासिन्दाको घरखेत र जग्गाजमिनको लालपर्ूजा नहुँदा स्थानीयवासिन्दालाई समस्या परेको छ ।
लमजुङ र मनाङको सिमानामा पर्ने ताल गाउँमा २०२८ सालतिर मनाङको नाचै, घेराङ, ओडार, लमजुङको चिप्ला लगायतका ठाउँवाट वसाइँ सरेर स्थानीयले वस्ती वसालेका थिए ।
हिमालपारी मनाङमा हिमपात रोकिएन
देशभरको मौसममा सुधार आएको भनिएपनि हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा अझै हिमपात भईरहेको छ ।
आईतवार माथिल्लो मनाङका ७, नार र फू गाविस साथै सदरमुकाम चामेमा मात्रै हिमपात भएकोमा सोमवार तल्लो मनाङका बाँकी ३ गाविसमा पनि हिमपात भयो ।
सिंगो जिल्लामा १३ वटा गाउँ विकास समिति रहेको मनाङका सवै भागमा सोमवार हिमपात भएको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सदरमुकाम चामेसहित तल्लो मनाङको ताचै बगरछाप, थोँचे र धारापानी गाविसका वस्तीहरुमा
मनाङ र लमजुङमा भारी हिमपात
हिमालपारिको जिल्ला मनाङ र पहाडि जिल्ला लमजुङका ग्रामीण भेगहरुमा आईतवार भारीमात्रामा हिमपात भएको छ ।
माथिल्लो मनाङको मनाङ, टंकी मनाङ, खाङ्सार, घ्यारु, पिसाङ, ङावल, भ्राका गाविस, नारफू उपत्यका साथै सदरमुकाम चामेमा हिउँ परेको छ । सदरमुकाम चामे बजार क्षेत्रमा ३ फिट सम्म हिउँ जमेको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सनाले जानकारी दिए ।
हिउँ परेपछि मनाङका सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारी र स्थानीयवासिन्दाले हिउँ खेलेर मनोरञ्जन लिएका थिए ।
माथिल्लो मनाङका सवै विद्यालयहरु बन्द
अत्याधिक जाडोका कारण हिमालपारिको जिल्ला मनाङका विद्यालयहरु बन्द हुन थालेकाछन् ।
माथिल्लो मनाङको मनाङ, खाङ्सर, टंकी मनाङ, ङावल, घ्यारु, पिसाङ र भ्राका गाविसमा रहेका विद्यालयहरु जाडेका कारण बन्द भएकाछन् । नार र फू उपत्यकामा रहेका विद्यालयपनि बन्द भएकाछन् । जाडो अत्याधिक बढेपछि तल्लो मनाङका विद्यालयमा पनि विद्यार्थी र शिक्षक अनुपस्थित भएपछि विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
More than 20 yrs is expected to complete 65 km from Besisahar to Chame
19yrs has passed after the foundation stone was laid to constructed Besisahar to Chame which is only 65 km away from Besisahar but till now only 27 km is in operation. According to Major Indibar Gurung, lack of bugdet is the main reason behind the delay and around Rs 50 million additional budget is needed to complete the construction. According to him, three excavators, 16 compressors and 151 Army men are involved in construction and it is expected that it will be into operation by the mid-April next year if the additional budget is allotted.
तस्विरः कमान गुरुङ
दर्ुइवर्षघि ७ जना गोरखालीलाई हत्या गरेको अभियोगमा तारेखमा छाडिएका १ जनासहित६ जना मनाङ नारका वासिन्दालाई जिल्ला अदालत मनाङले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।
मनाङकारागारमा रहेका १९ जनामध्ये ५ जना र पुनरावेदन अदालत पोखराले तारेखमा छोडेका १८जनामध्ये १ जनालाई गएराती जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।
न्यायधिशकाशीनाथ पोख्रेलको एकलर् इजलासले मनाङ कारागारमा रहेका १३ जनालाई २ बर्षो कैदफैसला सुनाएको छ ।
नार हत्याकाण्डको सुनुवाइ सकियो
पटक-पटक स्थगित हुँदै आएको मनाङको चर्चित नार हत्याकाण्ड मुद्धाको सुनुवाई सकिएको छ । फैसला भने भोलि मंगलवार हुने छ ।
न्यायाधीश, सरकारी वकिल र प्रतिवादी वकिलको तालमेल नमिल्दा यसअघि ७ पटकसम्म सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
गत बिहीवारदेखि मुद्धाको बहस पैरवी सुरु भएको र भोलि मुद्धाको फैसला हुने जिल्ला अदालत मनाङले जनाएको छ ।
यसअघि न्यायाधीश, सरकारी वकिल र प्रतिवादीका वकिल नहुँदा ६ पटकसम्म मुद्धाको पेशी र्सर्दै आएको थियो ।
मनाङमा पर्यटन आगमनमा बृद्धि
विश्व प्रसिद्ध अन्नपर्ूण्ा पदमार्गमा पर्ने मनाङ जिल्लामा घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको घुइँचो लागेको छ ।
अन्नपर्ूण्ा संरक्षण क्षेत्र आयोजना -एक्याप) को मनाङस्थित कार्यालयका अनुसार यस वर्षसेप्टेम्वर महिनामा मात्रै यहाँ घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षो तुलनामा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
वर्षनी मनाङमा आउने पर्यटकको संख्या जसरी वृद्धि हुदै गएको छ र्,पर्यटन व्यवसायमा देखिएको राम्रो लक्षण भएको सरोकारवालाहरुले वताएकाछन् ।
यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरु पर्यटकहरुका लागि लागि वर्षोनी कुनै न कुनै पर्यटन सम्वन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गर्छन् ।
अचेत अवस्थामा हिमालवाट भरियाको उद्धार
हिमालपारीको जिल्ला मनाङको उच्च हिमाली क्षेत्रवाट एक नेपाली भरियालाई ९ दिनपछि अचेत अवस्थामा उद्धार गरिएको छ ।
माथिल्लो मनाङको मनाङ गाउँवाट तिलिचो ताल हुँदै ५ हजार २ सय मीटर उचाईको मेस्कोण्डो भञ्ज्याङ उक्लेर मुस्ताङको जोमसोम जाने क्रममा छाडिएका ५५ बषिर्य सुब्बा तामाङको उद्धार भएको हो ।
हिमालयन उद्धार संघ नेपालसंग आवद्ध विदेशी डक्टरसहितको टोली घुम्न जाने क्रममा तिलिचो तालभन्दा माथि हिउँमा बेरिएको अवस्थ्ाामा भेटिएका नुवाकोट त्रिशुलीका तामाङलाई उद्धार गरिएको होटल ब्यवसायी समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।